Wararka - Sida loo doorto bacaha qashinka
Horumarka tayada nolosha, tirada iyo noocyada qashinka guriga ayaa sidoo kale sii kordhaya, laga bilaabo waraaqaha musqusha ilaa cuntada hadhaaga ah.
Bacaha qashinkawaxay ka mid yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qoys kasta, iyo tayada xun ee bacaha qashinka ee xaashida musqusha ee caadiga ah iyo qolofta khudaarta, laakiin mar haddii ay la kulmaan hadhaaga iyo waxyaalaha qaar maraq iyo biyaha ayaa aad u xanaaqi doona.
Waxaa jira noocyo badan oo bacaha qashinka ah oo suuqa yaal, markaa sidee baan u dooran karnaa maalmaha shaqada?Haddaba sidee ku kala garanaysaa bacda qashinka iyo tan xun?
Ugu horrayn, bacaha qashinka hoose waxay guud ahaan isticmaalaan baco dib loo warshadeeyey ama alaabta gacanta labaad ee dib loo warshadeeyey.Noocan ahbacda qashinkalafteedu waxay leedahay ur caag ah oo culus iyo formaldehyde iyo walxo kale oo waxyeello leh, qaar badan oo ka mid ah bacaha qashinka hoose waxay leeyihiin qaybo ama dhibco ku firirsan bacda, taas oo si fudud loo kala saari karo.Bacaha qashin-qubka ee tayada sare leh ayaa gebi ahaanba hufan oo aan la jabin karin.
Maanta waa tayo aad u wanaagsanbacda qashinka, Ugu horreyntii dhammaan walxaha, isticmaalka walxaha cusub ee PE, badbaado iyo caafimaad leh, ma laha sifooyin ur ah, oo lagu kabo bacda tignoolajiyada heerkulka joogtada ah ee jirka oo adkaysi leh, xoogga xajinta waa mid xooggan, ma fududa in la dhaawaco.
Marka labaad, awoodda biyuhu, waxaa jira waxyaabo badan oo qashinka guriga ah waa maraq iyo biyo.Haddii bacda qashinka ay fududahay in la daadiyo, maaha kaliya wax laga yaqyaqsado markaad iska tuurto, laakiin sidoo kale aad bay u dhibeysaa inaad soo qaadato.
Boorsada qashinka ee noocan ah waxay isticmaashaa habka afuufista filimka isku dhafka ah, waxay leedahay awoodda iska caabinta dalool ee aad u wanaagsan, xitaa waxay haysaa 20 kiiloogaraam oo durian ah sidoo kale ma dhaawacayso.
Isla mar ahaantaana, aad bay u adag tahay, xitaa haddii cadaadisku aanu si fudud u jabin.
Nooca barta jabinta ayaa balaartay furitaanka, si loo xalliyo kuwa fudud ee la jeexjeexay xishoodka.